Amazon Top Deals - မတ်လ ၁ ရက်မှမတ်လ ၇ ရက်၊ ၂၀၂၁ | Androidsis
ထိပ်တန်း Amazon အရောင်းအ ၀ ယ်များ - မတ် ၂၁ ရက်မှ ၂၀၂၁ အပတ်
သင့်တွင် Telegram ရှိပါကကျွန်ုပ်တို့၏ Bargain စတိုးသို့စာရင်းသွင်းခြင်းကိုမရပ်ပါနှင့် ဒီ link ကိုနှိပ်ပါ
Androidsis မှသင့်ကိုယူလာပါ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁ ရက်မှ ၇ ရက်အကြား Amazon အတွက်အကောင်းဆုံးကမ်းလှမ်းသည်
Android operating system ၏ကမ္ဘာကြီးနှင့်အမြဲချိတ်ဆက်နေသည့်နည်းပညာထုတ်ကုန်များနှင့်သက်ဆိုင်သောကမ်းလှမ်းမှုများသည်ယနေ့အွန်လိုင်းအကြီးဆုံးစတိုး၏အများနှင့်အများကြားတွင်ဖုံးကွယ်ထားသည့်လျှော့စျေးထုတ်ကုန်များကိုအခြားသူတစ် ဦး ဦး အားသင်သိစေရန်ဖြစ်သည်။
သငျသညျသူတို့အားအဘယ်သူမျှမလွဲချော်နိုင်ရန်, ငါတို့နှစ်တွင်အားလုံးလအတွင်းအပတ်စဉ်အခြေခံပေါ်မှာ update လိမ့်မယ်တဲ့ post ကို ထိပ်တန်းကမ်းလှမ်းမှုများအမေဇုံသည်ကျွန်ုပ်တို့အားပုံမှန်ကမ်းလှမ်းသည် နှင့်ကမ်းလှမ်းမှုသက်တမ်းကုန်ဆုံးသည်အထိသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့သည်အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းဖြင့် ၀ ယ်ရန်အလွန်စိတ်အားထက်သန်သောကုန်ပစ္စည်းကုန်သည်အထိများသောအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်များသောအားဖြင့်ရှာမတွေ့ပါ။
Flash ကမ်းလှမ်းမှုများ, နာရီအနည်းငယ်သာရရှိနိုင်ပါသည် !!!
ဒီအပတ်နဲ့စတာပါ များသောအားဖြင့်နာရီအနည်းငယ်သာကြာသော Amazon ကိုမယုံနိုင်လောက်အောင် Flash သည်, ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ကဒီပို့စ်ကိုဖတ်သည့်အခါသေချာပေါက်ကတည်းကဒါဟာတိကျတဲ့ထုတ်ကုန်တစ်ခုသာအကြံပြုလို့မရပါဘူး၊ ၎င်းသည် Flash ကမ်းလှမ်းချက်၊ နေ့၏ကမ်းလှမ်းချက်သို့မဟုတ်နာရီအနည်းငယ်အတွင်းကုန်ဆုံးချိန်ကတည်းကကမ်းလှမ်းခြင်းမရှိတော့ပါ။
သို့သော်မည်သို့ပင်ဆိုစေ, Flash Flash ကမ်းလှမ်းချက်များနှင့်ကိုက်ညီပါက !!!သင်လုပ်ရန်မှာရောင်းရန်ရှိပစ္စည်းများအားလုံးကိုကြည့်ရှုရန်နှင့်နာရီအနည်းငယ်အတွင်းမယုံနိုင်လောက်အောင်စျေးနှုန်းများဖြင့်လျှော့ထားသောထုတ်ကုန်များစွာကိုရှာဖွေရန်အောက်ပါလင့်ခ်ကိုနှိပ်ပါ။
Amazon ၏နေ့၏ Flash အရောင်းအ ၀ ယ်အားလုံးကိုကြည့်ပါ
၂၀၂၁၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၂ ရက်မှ ၂၈ ရက်အပတ်အတွက်ကမ်းလှမ်းချက်များ
၂၈၉ ယူရိုအတွက် ၃၈ ရာခိုင်နှုန်းလျှော့စျေး Galaxy A71
ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်အရောင်များ67 "infinity-o display သည်သင့်အားကမ္ဘာကိုကြည်လင်ပြတ်သားမှုနှင့်အရောင်အသွေးစုံလင်စွာဖြင့်ပြသသည်။
သင်၏ဂိမ်းကစားချိန်များအတွက်ဘက်ထရီသည် ၄၅၀၀ mAh ဘက်ထရီနှင့်တန်းတူဖြစ်သင့်သည်။ သင်အလွယ်တကူကစားနိုင်သည်။
စွမ်းအားပြည့်သောအဓိကကင်မရာစနစ် galaxy a71 သည်မည်သည့်အခြေအနေမှမဆိုနီးပါးအတွက်မှန်ဘီလူးရှိသည်။
Safety First မျက်နှာပြင်လက်ဗွေစကင်နာသည်သင်နှင့်သင်၏နဂါးငွေ့တန်းမှ ... ကာကွယ်ပေးသည်။
၁၃၉ ယူရိုအတွက် ၁၃% လျှော့စျေး Galaxy M11
သင်၏ဖျော်ဖြေမှုလောကကိုချဲ့ထွင်ပါ။ Galaxy m11 တွင် ၆.၄ လက်မ hd + infinity-o မျက်နှာပြင်တပ်ဆင်ထားသည်။
M11 သည်ခံစားသကဲ့သို့ကောင်းမွန်သည်။ အနက်ရောင်၊ သတ္တုအပြာနှင့်ခရမ်းရောင်အရောင်ရွေးချယ်စရာများသည်ခေတ်မီထိတွေ့မှုကိုပေါင်းထည့်ပေးသည်။
M11 ၏သုံးချောင်းကင်မရာသည်သင်၏ဓါတ်ပုံများကိုမြှင့်တင်ရန် ပို၍ ရှုထောင့်များကိုပေါင်းထည့်သည်။ အဓိက 13mp ကင်မရာသည်ဓာတ်ပုံရိုက်သည်။
သင့်ဓါတ်ပုံများတွင် ultra-wide ကင်မရာ၊ 77 ° wide-angle နှင့် 115 ° ultra-wide angle ဖြင့်ပိုမိုကြည့်ရှုပါ။
၁၈၈ ယူရိုအတွက် ၃၀% လျှော့စျေး Redmi Note 8 Pro
64 MP Ultra-high resolution quad ကင်မရာနှင့် 4K video နှင့် 20 MP selfie ကင်မရာ
၆.၅၃ "FHD + ပြသခြင်းနှင့်လျှော့ချခြင်း; TÜV Rheinland သည်အပြာရောင်အလင်းကိုအသိအမှတ်ပြုသည်
အရည်အအေးစနစ်ပါသော Helio G90T ဂိမ်းပရိုဆက်ဆာ; Wi-Fi X အင်တာနာ၊ ဂိမ်းကစားသူများအတွက်လျှို့ဝှက်လက်နက်
4500 mAh ဘတ္ထရီ ၄၀ W မြန်သောအားသွင်းဖြင့်ဖြစ်သည်
၁၉၉.၉၉ ဒေါ်လာဖြင့်သာလျှော့စျေး ၂၀% လျှော့စျေး Redmi Note 9T
မြင်ကွင်း - ၆.၅၃ "၁၀၈၀ x ၂၃၄ ပစ်ဇယ်
ပရိုဆက်ဆာ: Mediatek Dimensity 800U 5G 2.0GHz
ကင်မရာ: Triple, 48MP + 2MP + 2MP
ဘက်ထရီ: 5000 mAh
၂၈.၂၃ ယူရိုအတွက် ၂၉% လျှော့စျေး Xiaomi Mi Band 5
အသစ် Amoled အရောင် Touch မျက်နှာပြင်
မြင့်မားသောရေခံနိုင်မှု - Xiaomi Mi Band5သည်ရေအောက်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်နိုင်ပြီးသင်၏နေ့စဉ်လုပ်ငန်းဆောင်တာများကိုလုပ်ဆောင်နိုင်သည်။
အဆင်ပြေသောအင်္ဂါရပ်များ - SMS၊
သင်၏ကျန်းမာရေးကိုစီမံခြင်း - Xiaomi Mi Band5သည်သင်၏ခြေလှမ်းများ၊ နှလုံးခုန်နှုန်း၊ ကယ်လိုရီများစသည်တို့ကိုစောင့်ကြည့်လိမ့်မည်။ နှင့်လုပ်နိုင် ...
၁၃၇.၉၀ ယူရို ၄၂% လျှော့စျေး Huawei Watch GT2
Huawei နာရီ၏ GT2 အားကစားသည် ...
HUAWEI မှပထမဆုံးထုတ်လုပ်သော Kirin A1 သည်အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုနည်းပါးခြင်းကိုပေးသည်။
HUAWEI WATCH GT2(46mm) တွင် 3D မှန်မျက်နှာပြင်ထည့်သွင်းထားပါသည်။ ၎င်း၏ ၁.၃၉ လက်မ AMOLED မျက်နှာပြင်သည် ...
လေ့ကျင့်ခန်းများနှင့်နေ့စဉ်ဘ ၀ များတွင် Bluetooth ခေါ်ဆိုမှုများကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။ စက်ဘီးစီးခြင်း၊
လေ့ကျင့်မှုပုံစံ (၁၅) ခု - အခြေခံကနေအဆင့်မြင့်အဆင့်အထိအဆင့်မြင့်တဲ့အဆင့်အထိပရော်ဖက်ရှင်နယ်သင်တန်းများ ...
ယူရို ၉.၆၉ အတွက် ၂၁ ရာခိုင်နှုန်းလျှော့စျေးဖြင့် Beikell ကားအထောက်အပံ့
Safe Stable Installation: - အလွန်ခိုင်ခံ့သောစုပ်ယူနိုင်သောခွက်သည် super adherent gel gel pad ပါသောကြောင့် ...
အဆင်ပြေသောသော့ခတ်ခြင်းနှင့်ဖြန့်ချိခြင်း: - ခလုတ်နှိပ်ခြင်းတစ်မျိုးတည်းသောစနစ်သည်သင်၏ဖုန်းကိုသော့ဖွင့်ရန်သို့မဟုတ်သော့ဖွင့်ရန်ခွင့်ပြုသည်။
တိုးချဲ့နိုင်သောလက်မောင်း: - အဝေးကြည့်မှန်ပြောင်းကိုသင်လိုချင်သောအရှည်သို့ချဲ့နိုင်သည်။
ဘက်စုံကြည့်ရှုခြင်း - ၃၆၀ ဒီဂရီဘောလုံးအဆစ်သည်အကန့်အသတ်မရှိကြည့်နိုင်သည့်ထောင့်ဖြစ်သည်။ သင်၏နေရာချပါ
Tryone အထောက်အပံ့ကို ၂၅% လျှော့စျေးဖြင့် ၁၄.၉၉ ယူရိုသာရှိသည်
Xiaomi Mi Watch Lite သည်ယူရို ၅၄.၆၈ နှင့် ၉% လျှော့စျေးရှိသည်
မီးသတ်တီဗီ Stick | အခြေခံ Edition ကို 59.99 ယခု PRIME ဖောက်သည်များအတွက် 39.99
Google Chromecast ၏စျေးနှုန်းအတွက်ယခုသင်တစ်ခုလုံးရနိုင်သည် အမေဇုံမီးသတ်တီဗီ Stick အခြေခံ Edition ကိုသင်၏တီထွင်မှုဆိုင်ရာရုပ်မြင်သံကြားတစ်ခုလုံးကို YouTube တီဗွီ၊ Netflix၊ HBO၊ Rakuten တီဗီနှင့်အမေဇုံချုပ်တွင်အသုံးပြုခြင်း၏အားသာချက်များကိုရရှိရန်အတွက် Smart TV တစ်ခုလုံးသို့ပြောင်းလဲသွားမည့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရသည့်စက်ပစ္စည်း။ သင့်ရဲ့အကောင့်ကို Amazon Prime ဗီဒီယိုမှအကောင်းဆုံးသောတီဗီဇာတ်လမ်းတွဲများနှင့်အချိန်တိုင်းရုပ်ရှင်များကြည့်ရှုရန်။
Recuerda Que ဒီ gadget ရဲ့တရားဝင်ဈေးနှုန်းကတော့ယူရို ၅၉.၉၉ ဖြစ်ပါတယ် ဒါပေမယ့် ၂၀ ဒေါ်လာလျှော့စျေးနဲ့ရနိုင်တယ်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည် Amazon Prime အသုံးပြုသူဖြစ်လျှင်ယူရို ၃၉.၉၉ သာဖြစ်သည်.
ဒီ Stick TV ကို Amazon ကနေရယူချင်ရင်ဒါကိုငါအကြံပေးပါမယ် တစ်လအမေဇုံချုပ်၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုစမ်းကြည့်ပါ ဒါကြောင့်တစ် ဦး သည်ကတည်းက ပထမလအတွင်းမည်သည့်ကတိက ၀ တ်မပါဘဲငှားရမ်းနိုင်ပြီးအချိန်မရွေးစာရင်းပေးသွင်းနိုင်သည်.
ဒီမှာ Huawei စမတ်ဖုန်းကိုရွေးချယ်ပါ
ဤနေရာတွင် Samsung မှကမ်းလှမ်းချက်အားလုံးကိုရယူပါ။
ဤ link ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့် Xiaomi ကမ်းလှမ်းချက်အားလုံးကိုရယူပါ။
ဒီမှာနှိပ်ပါ BELKIN ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ
AnTuTu ၏အဆိုအရစွမ်းအားအမြင့်ဆုံးစမတ်ဖုန်း ၃ ခု
Opto Find X2 Pro 5G ကိုယူရို ၅၀ နှင့် D & € 50 ထပ်မံထည့်သွင်းထားသော€ & 8 တန်ဖိုးရှိ Bang & Olufsen Beoplay H252.85i နားကြပ်များ၊ ယခုယူရို ၁၁၉၉ အတွက်တန်ဖိုးသတ်မှတ်ထားသည်။
OPPO Find X2 PRO 5G ...
နောက်ကင်မရာသုံးခု၊ အဓိကကင်မရာမှာ 48 MP၊ 48MP ultra wide angle နှင့် 13MP telephoto ဖြစ်သည်။ ရှေ့ကင်မရာ ...
120 Hz, 6,7” ကွေးကောက်ထားသော OLED ဖန်သားပြင်နှင့်အရောင်ပေါင်းဘီလီယံပေါင်းများစွာကိုပြန်လည်ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ သင့်အားကြည့်ရှုရန်
4260mAh ဘက်ထရီသည်တစ်နေကုန်ဆက်နေရန် 65W ဖြင့်စူပါအလျင်မြန်စွာအားသွင်းနိုင်သော VOOC သည် ... အားသွင်းရန်အာမခံပါသည်။
12 GB RAM နှင့် 512GB သိုလှောင်မှုပမာဏသည် Qualcomm Snapdragon 865 Mobile Platform ပရိုဆက်ဆာနှင့်အတူ၊ ကမ္ဘာပေါ်တွင်တန်ခိုးအရှိဆုံး ...
Mi Band 10 + Mi True Wireless Earphone3ကိုယူရို ၆၉၉ ဖြင့်ဝယ်ယူမည်ဖြစ်သည်။ Eurazos ၁၀၀ သိမ်းတယ်။
Xiaomi က Mi 10 Pack ...
အလင်းများ။ ကင်မရာ။ လှုပ်ရှားမှု။ Xiaomi Mi 10 အသစ်ဖြင့်မိုဘိုင်းစွမ်းအင်ကန့်သတ်ချက်ကိုပြန်လည်သတ်မှတ်ပါ
Xiaomi Mi 10 တွင် True Wireless Earphone2နားကြပ်နှင့် Xiaomi Mi band3တို့ပါ ၀ င်သည်။
108MP quad ကင်မရာနဲ့ 8K video နှင့် 20MP selfie front camera ။
၆.၆၇ "AMOLED Full HD + မျက်နှာပြင်နှင့် 6.67D rounded glass နှင့် TrueColor နည်းပညာတို့ပါ ၀ င်ပြီးအကောင်းဆုံး Xiaomi မျက်နှာပြင် ...
Oppo Find X2 + Bang & Olufsen H8i နားကြပ်ကိုယူရို ၉၉၉ ဖြင့်သာပေးမည်
OPPO Find X2 5G ...
နောက်ကင်မရာသုံးခု၊ အဓိကကင်မရာမှာ 48 MP၊ 12MP ultra wide angle နှင့် 13MP telephoto ဖြစ်သည်။ ရှေ့ကင်မရာ ...
4200mAh ဘက်ထရီသည်တစ်နေ့လုံးဆက်နေရန်၊ ၆၅ ဝပ်ဖြင့် VOOC နှင့်မြန်ဆန်သောအားသွင်းရန်ဖြစ်သည်။
12 GB RAM နှင့် 256GB သိုလှောင်မှုပမာဏသည် Qualcomm Snapdragon 865 Mobile Platform ပရိုဆက်ဆာနှင့်အတူ၊ ကမ္ဘာပေါ်တွင်တန်ခိုးအရှိဆုံး ...
AnTuTu ၏အဆိုအရအလယ်အလတ်တွင်အင်အားအကြီးဆုံးစမတ်ဖုန်း ၃ ခု (ယခုအချိန်တွင် Amazon တွင်မရရှိနိုင်ပါ)
Xiaomi Redi 10X PRO ကို Gearbest တွင်ယူရို ၃၈၄ ဖြင့်ရောင်းချမည်
OPPO Reno35G သည်ယူအက်စ် ၃၉၂.၈၃ အတွက် Aliexpress တွင်ရရှိနိုင်ပါသည်
Xiaomi Redmi 10X 4GB RAM 128GB ROM + Mi Band5ကိုယူရို ၁၉၄.၄၂ သာဝယ်နိုင်သည်။ Aliexpress
အောက်ပါ link ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်သင်သည် Amazon ၏အရောင်းရဆုံးကုန်ပစ္စည်းများအပိုင်း၊ ကုန်ပစ္စည်းအမြောက်အများနှင့် Amazon သုံးစွဲသူများတန်ဖိုးအရှိဆုံးထုတ်ကုန်များဖြစ်ကြောင်းအာမခံချက်ရှိသောကဏ္ sections မျိုးစုံမှထုတ်ကုန်များကိုသင်ဝင်ရောက်လိမ့်မည်။ ။
သင်သိလိုသောအရာသည်အမေဇုန်သို့အခြားမည်သူ့ကိုမဆို ၀ ယ်ရန်သို့မဟုတ်သင့်အကြိုက်ဆုံးစာရင်းတွင်စာရင်းသွင်းရန်သို့မဟုတ်သင့်တော်သည်ဟုယူဆသောအချိန်တွင် ၀ ယ်ရန် Amazon သို့ရောက်ရှိလာသည့်ထုတ်ကုန်များအကြောင်းနောက်ဆုံးပေါ်သတင်းများဖြစ်လျှင်သင်သာ အမေဇုန်တွင်ရောင်းချခဲ့သောမယုံနိုင်လောက်အောင်ရှိပြီးသားထုတ်ကုန်များစာရင်းထဲသို့အသစ်ဖြည့်စွက်မှုများနှင့်နောက်ဆုံးပေါ်သတင်းကိုဆက်ထိန်းထားရန်အောက်ပါလင့်ခ်ကိုနှိပ်ပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » ထိပ်တန်း Amazon အရောင်းအ ၀ ယ်များ - မတ် ၂၁ ရက်မှ ၂၀၂၁ အပတ်
သင်အကြံပြုသောကုန်ပစ္စည်းများ၏လင့်ခ်များကို "၀ ယ်ယူရန်" မလိုပဲ၎င်းတို့သည်ကုန်ပစ္စည်းကုန်ကျစရိတ်များကြောင်းတွေ့ရှိရန်မလိုဘဲဥပမာထုတ်ကုန်များ၏သတင်းအချက်အလက်အားလုံးကိုရယူနိုင်ရန်သင့်အားသင်အကြံပေးသင့်သည်။ ဝက်ဘ်၌ကိုယျ့ကိုယျကိုခွဲခြားသတ်မှတ်။
Telegram တွင် WhatsApp အဆက်အသွယ်များသည်မည်သို့သိနိုင်သနည်း